ကောင်းကင်ကို: ဒေါက်ပြုတ်သွားတဲ့ ကျောက်ရုပ်
ပါးပေါ်ကို တစ်ပေါက်ပြီး တစ်ပေါက်
ငါကမ္ဘာလို့ ထင်ထားခဲ့တဲ့ ဥခွံ
အနုလွန် ပြီးတော့ အက်ကွဲ
အပြင်ဘက်မှာ ငါမခံနိုင်တဲ့ ငရဲပဲ ရှိတယ်။
ဘယ်အချိန်ကတည်းက ဝင်ခွေနေမှန်းမသိတဲ့ မီးတောက်မြွေတစ်ကောင်
ငြိမ်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်မှ ပါးပြင်ထောင်ပြီး
ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်များစွာနဲ့ ငါ့စိတ်ကိုလောင်တယ်။
ပူပြီးသား ရင်ဘတ်ကို တစိမ့်စိမ့်ထပ်နွှေးရင်း
ခလုတ်ကို ညှစ်လိုက်ဖို့  ငါ့လက်ညှိုးက ကွေးကွေးလာတယ်။
ငါ့ကိုငါ ဖွင့်ခဲ့တဲ့ သော့တစ်ချောင်းဟာ
ရုတ်တရက်ပဲ ဓားတစ်လက် အသွင်ပြောင်း
ကိုယ့်နောက် ကိုယ်လိုက်ရင်းကိုယ်နဲ့ ဝေး
ဒီအရှုံးသင်္ကေတတွေက တစ်စက်ပြီး တစ်စက်
ရင်ထဲက ငလျင်နဲ့ 
ပါးပေါ်ကို တစ်ပေါက်ပြီး တစ်ပေါက်
Posted by Kaung Kin Ko at 5:06 PM
the third one is cool! good luck for long fiture!
ဟူးးးးးးးးးးးးးး ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ မွန်းကြပ် မောလျသွားတယ်။ ကဗျာလေး ကောင်းတယ်။
ဒေါက်ပြုတ်သွားတဲ့ ကျောက်ရုပ် ...
ကိုလည်း..ညီ့ ရဲ့ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ပါ.....
ဖောက်ပါစေ အစ်ကို...။ သစ္စာဖောက်တတ်ခြင်းကိုယ်က လောကရဲ့ သစ္စာတရားတစ်ခုပဲလေ...။
ကိုကောင်းကင်ကြီးရေ.. ဖတ်ရတာ အားရလိုက်တာ..
အစ်ကိုရေ!... ဖတ်ရင်း နဲ့ အလိုလို စိတ်မောမိသွားတယ်... ခံစားရပါတယ်...
တစိမ့်စိမ့် ဖတ်ပြီး တရိပ်ရိပ်တက်လာတယ် ။ ဒီလိုကဗျာတွေ ရေးတဲ့နေရာမှာတော့ ကိုကောင်းကိုလက်ဖျားခါတယ် ။ မျက်လုံးထဲကလောက်တွေ ပါးပေါ်ကို တစ်ပေါက်ပြီးတပေါက် ... ။ လှတယ်ဗျာ စာသား ။ သစ္စာတွေကတော့ သူတပြန်ကိုယ်တပြန် ဖောက်နေကြဆဲ ။
အားပါးပါး..ကောင်းကင်မှာ ဓူဝံကြယ် နောက်တစ်စင်းကို
ကဗျာရဲ့ အသံတွေ စည်းချက်ထည့်ထားတာ လှမှလှ..
ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တစ်ပိုဒ်ချင်းဆီမှာ ရေးထားတာ သိပ်ပြီး ထိမိတယ်ဗျာ...
ကာရံလည်းမိဆို.. စကားလုံးအကူတွေ သိပ်အားကောင်းလွန်းတယ် အစ်ကိုရေ..
ကိုယ့်နောက်ကိုယ်လိုက်ရင်း ကိုယ်နဲ့ ဝေးသတဲ့လား ကဗျာဆရာ… ကိုယ့်ဆီက ကိုယ်က လွတ်မြောက်သွားတာလား… ကိုယ့်ဆီက ကိုယ်က ကိုယ်လွတ်ရုန်းသွားတာလား… သေချာတာက တခါတခါ ကိုယ်က ကိုယ့်ကို ပြန်ပြန်လွမ်း… တခါတခါ ကိုယ်က ကိုယ့်ကို ခါးခါးသီးသီးမုန်း… ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ဝေးခဲ့တာ ကြာခဲ့ပေါ့...
ကောင်းကင်ကိုရဲ့ ကျောက်ရုပ်ကိုဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း နောက်ထပ် လူယောင်ဆောင်တဲ့ ကျောက်ရုပ်တရုပ်အကြောင်း ရေးလိုက်ပါတယ်။
ပခုံးဘားဟာ အခက်တွေ ဝေနေလည်း
နှလုံးသားမှာ ရတက်တွေ ပွေနေဆဲ။
နောက်ပြုတ်မှ ပူသယောင်ယောင်နဲ့ ညစ်….
ကိုကောင်းကင်ရေ ခံစားသွားပါတယ်။ အောက်ဆုံးအပိုဒ်က ဒေါက်ပြုတ်သွားတဲ့ ကျောက်ရုပ်တစ်ယောက် ဆိုတာကြီးက နည်းနည်းထောင့်နေသလားလို့ ။ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဆိုရင် ပိုကောင်းသွားမယ်နဲ့ တူတယ်။ ပြုတ် နဲ့ ကာရန်လှမ်းယူလိုက်ရတာပေါ့။ ခင်မင်လေးစားလျက်။
စာသားတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ကဗျာတွေက သိပ်ကောင်းတယ်နော်။
စကားပြေအဖြစ် ထပ်ပြီး အဖျက်ဆီးခံခဲ့းရတဲ့ ကျွန်တော့်...